Uhambo lwe-Hajj olwehlisiwe luqala eSaudi Arabia - izingcingo ezidluliselwe emuva
Uhambo lwe-Hajj olwehlisiwe luqala eSaudi Arabia
Uhambo lwaminyaka yonke lweHajj olwenziwa amaSulumane emhlabeni wonke luqale eSaudi Arabia, lehliswa kakhulu ngenxa ye-coronavirus.
Abavakashi bamazwe omhlaba banqatshelwe ukuhamba eMecca ukuzama ukunqanda lo bhubhane.
Kulindeleka kuphela abahambeli abayi-10, uma kuqhathaniswa abacishe babe yizigidi ezi-000.
Iningi labo livame ukuvela emazweni aphesheya, kepha kulo nyaka ukuphela kwabantu abavunyelwe ukubamba iqhaza yilabo abahlala embusweni.
Ababambiqhaza bahlolwe amasheke okushisa nokuhlolwa kwegciwane lapho befika eMecca ngempelasonto, kusho abezindaba ze-AFP.
Abathembekile futhi kuzodingeka bahlukaniswe ngaphambi kokuhamba. Imaski yobuso izoba ngegunya ngaso sonke isikhathi.
Isihloko semidiyaNgonyaka owedlule, u-Anisa walahlekelwa ngunina, umsebenzi wakhe kanye nomuzi wakhe futhi wayenethemba lokuthi iHajj izomsiza athole induduzo.
Engxoxweni naleli sonto ne-al-Arabiya TV exhaswa yiSaudi Arabia, uNgqongqoshe WezamaPilgrimages, uMohammed Saleh Binten, uthe izihambi bezihlaliswa zodwa emizini yazo ngaphambi kwezinsuku ezine zokuvalelwa emahhotela IMecca.
Umbuso uqophe amacala angaphezu kuka-270000 ngokufa kwabantu abacishe kube ngu-3000 XNUMX, okuyisifo esiwumqedazwe omkhulu eMiddle East.
Izwe liphakamise kuphela ukuvimba kwezwe ngenyanga edlule . Imikhawulo enzima yokunqanda ukusakazeka kwezifo iqale ukusebenza ngoMashi, kufaka nesikhathi sokuchitha amahora angama-24 emadolobheni amaningi.
Isihloko semidiyaAmaSulumane emhlabeni jikelele enza iHajj minyaka yonke eMecca, eSaudi Arabia
Ukwenza ukuhamba kube kanye okungenani kungenye yezinsika ezinhlanu zamaSulumane - izibopho ezinhlanu ukuthi wonke umSulumane, onempilo enhle futhi ongakwazi ukuzisebenzisa, kufanele azifeze ukuze aphile impilo enhle nethembekile, ngokusho kwe I-Islam.
IKaaba, okuyisakhiwo esikhulu esakhiwe njengecube e-Grand Mosque yaseMecca esithathwa amaSulumane njengendawo enhle kunazo zonke eMhlabeni, sizungezwe ngamaqembu adumisa u-Allah ngoLwesithathu.
Ezinye izinto zokukhonza zizokwenziwa futhi lapho abahambi bevuselela umuzwa wabo wenhloso emhlabeni.
Lo mbhalo uvele okokuqala ku: https://www.bbc.com/news/world-middle-east-53571886
ECameroon: I-BCP yaseMorocco iphothula ukutholwa kwe-BICEC
UGunman udubula icala lokuhlambalaza enkantolo